हिउँदमा लोडसेडिङ हुने सम्भावना बढ्यो, के भन्छन् कुलमान ? - Deshko News Deshko News हिउँदमा लोडसेडिङ हुने सम्भावना बढ्यो, के भन्छन् कुलमान ? - Deshko News
हिउँदमा लोडसेडिङ हुने सम्भावना बढ्यो, के भन्छन् कुलमान ?
बिजुलीको किफायती प्रयोगका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, २५ मेगावाटको ग्रिड सोलार कार्यक्रम रोकिएका छन् । भारतबाट थप बिजुली आयातका लागि आवश्यक ढल्केबर सबस्टेसनको कामसमेत रोकिएको छ । यसले गर्दा हिउँदमा लोडसेडिङ हुने सम्भावना देखिएको हो । ‘वार्षिक रूपमा बिजुलीको माग करिब दुई सय मेगावाट बढिरहेको छ, तर त्यस अनुपातमा विद्युत् उत्पादन बढेको छैन,’ घिसिङले भने, ‘अहिलेकै जस्तो अवस्था रहने हो भने यस वर्षको हिउँदमा लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।